Ịga US? Usoro oke oke COVID na-adị mgbe ị laghachiri Canada
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Ịga US? Usoro oke oke COVID na-adị mgbe ị laghachiri Canada
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Ịga US? Usoro oke COVID ka dị ebe mgbe ndị njem laghachiri Canada.
Ndị bi na Canada nwere ike lelee mpaghara ma ọ bụ ókèala ebe obibi ha gbasara ịnweta akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 iji mee ka ha laghachi Canada.
Ndị njem kwesịrị ịlele ma ha tozuru ịbanye Canada wee mezuo ihe niile achọrọ tupu ha aga n'ókè.
Ndị njem ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa zuru oke bụ ndị tozuru oke ịbanye Canada na-aga n'ihu na-anwale ule enweghị usoro mgbe ha bịarutere.
A naghị anabata ule antigen, nke a na-akpọkarị "ule ngwa ngwa".
Na Nọvemba 8, 2021, United States ga-amalite ikwe ka ndị njem na-agba ọgwụ mgbochi si Canada banye United States na ọdụ ụgbọ mmiri maka ebumnuche (na-adịghị mkpa), dị ka njem nlegharị anya.
Agencylọ ọrụ na-ahụ maka oke ala Canada ga-achọ ichetara ndị njem na usoro ókèala ka dị maka ndị njem na-abata ma ọ bụ na-alaghachi Canada yana na ha kwesịrị ịgwa ha ma ghọta ọrụ ha ka ha na-eme atụmatụ njem ha.
Ndị njem kwesịrị ịlele ma ha tozuru ịbanye Canada ma zute ihe niile chọrọ ntinye tupu ị gawa oke. Ndị bi na Canada nwere ike lelee mpaghara ma ọ bụ ókèala ebe obibi ha gbasara ịnweta akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 iji mee ka ha laghachi Canada.
Ndị njem ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa zuru oke na-abịa Canada ga-emecharịrị nnwale molekụla COVID-19 tupu abịarute ma nyefee ozi iwunyere ha gụnyere ihe akaebe dijitalụ nke ịgba ọgwụ mgbochi na Bekee ma ọ bụ French na-eji nke efu. BịaruteCAN (ngwa ma ọ bụ weebụsaịtị) n'ime awa 72 tupu ịbata Canada. A naghị anabata ule antigen, nke a na-akpọkarị "ule ngwa ngwa". Ndị njem ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa zuru oke bụ ndị tozuru oke ịbanye Canada na-aga n'ihu na-anwale ule enweghị usoro mgbe ha bịarutere.
Maka njem dị mkpirikpi, nke na-erughị awa 72, ụmụ amaala Canada, ndị debanyere aha n'okpuru Iwu India, ndị bi na-adịgide adịgide na ndị echedoro na-eme njem na United States na-ahapụ ka ha mee ule molekul tupu ha abịarute tupu ha ahapụ Canada. Ọ bụrụ na ule ahụ karịrị awa iri asaa na abụọ mgbe ha batara Canada, a ga-achọrọ ha ka ha nweta ule molekul ọhụrụ tupu abịarute na United States.
Ndị njem na-enwetaghị ọgwụ mgbochi ma ọ bụ nke nwere akụkụ nke tozuru oke ịbanye Canada ga-aga n'ihu na-agbaso tupu mbata, mbata na ihe nyocha nke ụbọchị-8 nke COVID-19 chọrọ, yana iche maka ụbọchị iri na anọ.
Ndị njem nwere ike ịnwe igbu oge n'ọdụ ụgbọ mmiri ntinye n'ihi usoro ahụike ọha dịka CBSA agaghị emebi ahụike na nchekwa nke ndị Canada n'ihi oge nchere oke. Ndị CBSA na-ekele ndị njem maka nkwado na ndidi ha.
Ajuju niile gbasara ntinye US na ihe ahụike chọrọ, kwesịrị ka eduzi ya na kọstọm na nchekwa oke ala US.